Suryodaya TV || News
All News Select Genre All Current Affairs Entertainment
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थीक बर्ष २०७४÷७५ कोे राजस्वमा संकलनमा बिद्धी गरेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थीक बर्ष २०७४÷७५ कोे राजस्वमा संकलनमा बिद्धी गरेको छ । कार्यालयले गएको आर्थिक बर्ष अघिल्लो आर्थिक बर्षकोे तुलनामा सवारी कारवाही तर्फ १ करोड ५१ लाख ३४ हजार ५ सय रुपौँया बढी राजस्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले आर्थिक बर्ष ७३÷७४ मा ३ करोड १० लाख ६० हजार रुपौँया राजस्व संकलन गरेको थियो । सो आर्थिक बर्षको भन्दा डेढ करोड बढी ४ करोड ६१ लाख ३४ हजार ५ सय रुपौयाँ राजस्व संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष ७३÷७४ को तुलनामा अघिल्लो आिर्थक बर्ष झापामा सबारी दुर्घटनाको संख्यामा कमी आएता पनि मृत्युको संख्या बढेको छ । यो अवधीमा भएको १ सय ७१ सबारी दुर्घटनामा १ सय ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
सडक सिमा निर्धारण गर्दै फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालिएपछि बिर्तामोडका सडकमा बिभीन्न व्यवसय सञ्चालय गरेका व्यवसायी संकटमा परेका छन् ।
सडक सिमा निर्धारण गर्दै फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालिएपछि बिर्तामोडका सडकमा बिभीन्न व्यवसय सञ्चालय गरेका व्यवसायी संकटमा परेका छन् । बिर्तामोडको मुक्तिचौक आसपास उखुको जुस, ठेलामा मम चाउमिन, चटपटे पानीपुरी लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गरेरै धेरै व्यवसायीले आफ्नो परिवारको गुजारा टार्दै आएका थिए । व्यवसाय गर्न नपाउदा समस्यामा परेको व्यवसायीहरु बताउछन् । केही महिना यता सडक बिभाग र बिर्तामोड नगरपालिकाले बिर्तामोड बजार क्षेत्रका सडकमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता व्यवसायीलाई हटाउदै आएको छ । बर्षौ देखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी लाई उचित व्यवस्थापन नगरि नगरपालिकाले हटाउदा उनीहरु समस्यामा परेका हुन् । यता बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव शिवाकोटी भने नगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायलाई मात्रै संरक्षण गर्न सकिने बताउनु हुन्छ ।
दमक नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले विताएको १ बर्षमा थालनी गरेका काम कार्वाही पूर्णरुपमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगर दमक नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले विताएको १ बर्षमा थालनी गरेका काम कार्वाही पूर्णरुपमा सफल हुन सकेका छैनन् । दमक नगर पालिकाले यो बर्ष थालनी गरेको ३ सय २८ वटा काम मध्ये ८० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र काम सकिएको भौतिक निर्माण प्राविधिक शाखाका प्रमुख तथा इन्जिनियर तिर्थनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो । नगरक्षेत्रमा स्थानीय तहको २७ करोड ७३ लाख ३ हजार ५८ रुपँया बजेटमा कल्र्भट २४ वटा, ग्राभेल सडक १ सय ३, भवन तथा शौचालय निर्माण तथा मर्मत ५५, ढल २४, सिंचाई ४, ग्राभेल सहित ढल ९, ढलसहितको कालपत्रे सडक २५ र ढल सहित लकिङ योजना ८ गरी ३ सय २८ वटा योजना संचालनमा रहेको दमक नगर पालिका प्राविधिक शाखाले जानकारी दिएको छ । यस मध्ये हालै सकिएको आर्थिक बर्षमा १ सय ३६ वटा योजनाहरु मात्र पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको दमक नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
झापामा पछिल्लो सात महिनामा टिपरको ठक्कर एक महिलासहित ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
झापामा पछिल्लो सात महिनामा टिपरको ठक्कर एक महिलासहित ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार टिपरको ठक्करबाट घाइते हुनेको संख्या त्यसको दोब्बर रहेको छ । टिपरको ठक्करबाट भएको सवारी दुर्घटनामा परी ८ जनाको मृत्यु र १६ जना घाइते भएको कार्यालयका प्रवक्ता ट्राफिक प्रहरी सहायक निरीक्षक यमकुमार खड्काले बताउनु भयो । टिपर चालकको उमेर कम हुनु, चालक अनुमती पत्र नलिएर सवारी चलाउनु दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको ट्राफीक प्रहरीको भनाई छ । यसैबीच इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाले आज विना सवारी अनुमती पत्र चलाउर्दै गरेको मे १ ख २५२७ नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिइएको छ । भद्रपुरको पृथ्वीनगरबाट इटा लिएर आउँदै गरेकाबेला प्हरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यस वर्षको भानु साहित्य पुरस्कार भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान काँकरभिट्टाले धुर्मुस सुन्तली फाउडेसनलाई प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस वर्षको भानु साहित्य पुरस्कार भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान काँकरभिट्टाले धुर्मुस सुन्तली फाउडेसनलाई प्रदान गर्ने भएको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा सो पुरस्कार प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको हो । गत असार १२ गते बसेको प्रतिष्ठानको बैठकले पुरस्कार धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । २०६८ सालमा स्थापना भएको भानु साहित्यिक पुरस्कार यस अघि वरिष्ठ साहित्यकार श्याम शर्मालाई प्रदान गरिएको थियो । यस यता दोस्रो पटक यो पुरस्कार यहि असार २९ गते काँकरभिट्टा स्थित भानुको पूर्ण कदको सालिक रहेको परिसरमा आयोजना हुने समारोहमा वितरण गरिने आयोजकले बताएको छ । पुरस्कारको राशि १ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत तथा चीन भ्रमण मुलुकको हितमा भएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत तथा चीन भ्रमण मुलुकको हितमा भएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटि बैठकमा भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउदै ओलीले दुवै भ्रमणबाट नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभएको हो । भ्रमणबाट दुवै छिमेकीसँग सकारात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग पुगेको र नेपालको हितमा केही सन्धिसम्झौताहरु भएको उहाले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वयको रिपोर्टिङका साथै पार्टीको नियमावलीबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक स्थितिको थप समीक्षा र तीनै तहका सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बस्ने छ ।
नागढुंगामा बरामद भएको ६ किलो सुन भरियामार्फत भारत र्पुयाउने योजना रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आईतबार साँझ काठमाडौको नागढुंगामा बरामद भएको ६ किलो सुन भरियामार्फत भारत र्पुयाउने योजना रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारत र्पुयाउने योजनाका साथ रसुवाको केरुङबाट सुन ल्याईएको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । प्रहरीले ६ केजी सुनसहित सिन्धुपाल्चोकका तेन्जिङ तामाङलाई पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको हो । परिसरको टोलीले २३ वर्षीय तामाङले चलाएको बा ९५ प ८१६४ नम्बरको २ सय २० सिसिको पल्सर बाइकलाई नियन्त्रण लिएर खानतलासी गर्दा ६ केजी सुन बरामद भएको परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०१८ को पहिलो पाँच महिनामा पैदलमार्ग हुँदै झापाको काँकरभिट्टा नाका हुँदै ४ हजार भन्दा बढी विदेसी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।
सन् २०१८ को पहिलो पाँच महिनामा पैदलमार्ग हुँदै झापाको काँकरभिट्टा नाका हुँदै ४ हजार भन्दा बढी विदेसी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०१८ को जनवरीदेखि मे महिनासम्ममा ४७ देशका ४ हजार १ सय २६ जना पर्यटक स्थल मार्ग भएर नेपाल घुम्न आएको अध्यगमन कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ । सोहि अवधिमा ३ हजार ८ सय ८८ जना पर्यटक बाहिरिएका छन् । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो केही वर्षयतादेखि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा बृद्धि भएको छ । यस नाकाबाट भित्रिएका पर्यटकहरु स्थानीय स्तरका धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलदेखी पोखरा, लुम्बिनी, चितवन लगायतका ठाउँहरुको भ्रमण गर्न रुची देखाउने गरेको पाईएको छ ।
तेह्रथुमको माथिल्लो क्षेत्रमा याक र चौंरीको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्न थालेपछि मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाले चौंरी उत्पादन कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
तेह्रथुमको माथिल्लो क्षेत्रमा याक र चौंरीको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्न थालेपछि मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाले चौंरी उत्पादन कार्यक्रम शुरु गरेको छ । चरन क्षेत्रको अभाव, आन्तरीक तथा वाह्य परजिविको संक्रमण तथा युवा पुस्तामा याक र चौंरी पालनमा मोह घट्दै गएका कारण जिल्लामा याक र चौंरीको संख्या घट्न थालेपछि यी पशुको संख्या वढाउन अभियान नै चलाएको हो ।गाउँपालिकाको पशुसेवा शाखाले पहिलो चरणमा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका मोराहाङ, श्रीजुङ्ग, पौठाकका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएर याक र चौंरी उत्पादन कार्यक्रम शुरु गरेको हो । हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाले दुध, छुर्पी, मासु, छाला र समान ढुवानी गराउने प्रयोजनका लागि याक र चौंरी पालन गर्दै आएका छन् ।पाँच वर्ष अघि सम्म २ हजारको संख्यामा रहेका याक चौंरीको संख्या घटेर अहिले ९ सयको हाराहारीमा आईपुगेको पशुसेवा कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ ।
अबिरल बर्षासंगै आएको पहीरोले झापामा घर भत्काएको छ ।
अबिरल बर्षासंगै आएको पहीरोले झापामा आज एक घर भत्काएको छ । पहिरोले अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ३ कुम्भिटारका गणेश खनालको घर भत्काएको हो । पहिरोका कारण मानविय क्षति भने हुन पाएन । घर भत्कीएर विस्थापित भएको परीवारलाई नजिकै छिमेकीको घरमा राखीएको र पिडित परिवारलाई आवश्यक राहत सामाग्री प्रदान गरीएको रेडक्रस झापाका सभापति लोकराज ढकालले जानकारी दिनु भयो । उता अविरल आएको वर्षाका कारण पहिरोले घर पुरिँदा रोल्पामा सुत्केरीसहित तीनजनाको मृत्यु भएको छ । घरमा बसीरहेका बेला पहीरो आएर पुरीँदा रुन्टिगढी गाउँपालिका–५ सोइबाङका एकै घरका ३ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ । बाढीकाकारण झापा लगायत देशभरको जनजिवन प्रभावित भएको छ ।
सूर्याेदय टेलिभिजन एक परिचयः– नेपालको पूर्वीद्वार जिल्ला झापाको बिर्तामोड न.पा. ७ स्थित केन्द्रिय स्टेशन र कार्यालय राखि सञ्चालनमा आएको यस टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०७२/१२/२८को ईजाजत नं.११९-०७२/०७३ को प्रमाणपत्र प्राप्ती पश्चात् सक्रिय र सक्षम रुपमा प्रस्तुत हुर्दै आएको छ ।
SPACELINK TV AND MEDIA PVT. LTD.
BIRTAMODE-7, JHAPA, NEPAL
PHONE NO: +977-23545108 / 546308
MOBILE: 9801413647 / 9804920100
EMAIL: SURYODAYATV@GMAIL.COM/ INFO@SURYODAYATV.COM
Copyright @ Suryodaya Television and Media Pvt. Ltd. 2018